२० बानीहरू जुन तपाईंलाई एक सफल डिजाइनर बनाउँदछ क्रिएटिव अनलाइन
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् किन डिजाइनर वा अरू कोही व्यक्ति आफ्नो काममा सफल हुन्छ। यी कारणहरू सामान्यतया तपाईंको सम्बन्धित छन् प्रदर्शन र ब्यबहारहरूको श्रृंखला जुन कि त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेका छन् उनीहरूको जीवन भर उनीहरूलाई उनीहरूको प्रदर्शन मापन गर्न र योजना बनाउन यसलाई कसरी मद्दत गर्ने।
जहाँ सफलताको लागि कुनै विधि छैन, त्यहाँ धेरै छन् चीजहरू हामी गर्न सक्दछौं हाम्रो प्रदर्शन सुधार गर्न यहाँ केहि छन् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो तालिकामा अपनाउन सक्नुहुन्छ।
1 भावुक हुनुहोस्
2 आफ्नो कामको आलोचना गर्नुहोस्
3 तपाइँको कामको आलोचना गर्न भन्नुहोस्
4 तिनीहरूलाई तपाईंलाई अव्यावसायिक डेलिभरी समयमा राख्न नदिनुहोस्
5 सबै कुरामा प्रेरणा खोज्नुहोस्
6 अधिक गतिको साथ फिर्ता आउन आफैलाई दूरी गर्न सिक्नुहोस्
7 तपाई के राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्
8 सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस्
9 अभ्यास, अभ्यास र अभ्यास
10 तपाईंको प्राथमिकता क्षमता सुधार गर्नुहोस्
11 प्रचलनहरूको साथ अपडेट रहनुहोस्
12 तपाईले के गर्नु पर्छ त्यस भन्दा पछाडि जानुहोस्
13 दबाबमा काम गर्न सिक्नुहोस्
14 मल्टीटास्किंग क्षमता विकास गर्नुहोस्
15 राम्रो संगठन प्रणाली कायम गर्नुहोस्
17 तपाइँको उद्योग जान्नुहोस्
18 एक अधिकार बन्नुहोस्
19 तपाईंको ग्राहकहरूलाई ट्र्याक गर्नुहोस्
20 जब तपाइँ माथि हुनुहुन्छ, एलिभेटरलाई तल पठाउनुहोस्
सबैभन्दा डिजाईनरको क्यारियरमा महत्त्वेपूर्ण जोश हो। यो एक कडा हिटि industry उद्योग हो कि स्थिर चासो र प्रतिबद्धता चाहिन्छ। एक डिजाइनर बिरलै बढ्न र सबैभन्दा राम्रो बन्न सक्छ यदि ऊ unmotivated छ र आफ्नो गतिविधि आकर्षक छैन भने।
आफ्नो कामको आलोचना गर्नुहोस्
यो डिजाइनरहरूको लागि आवश्यक छ स्थिर आत्म मूल्यांकन र आलोचना को लागी क्षमता। यो परियोजनासँग खुसी हुन पर्याप्त छैन, यो माग गर्न आवश्यक छ र जहिले पनि सोच्दछ कि तपाईंले अझ राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। लामो समय मा यो आवश्यकता उत्कृष्टता हुन्छ.
तपाइँको कामको आलोचना गर्न भन्नुहोस्
दुई जोडी आँखा एउटा भन्दा राम्रो हुन्छन्, त्यसैले सधैं अन्य व्यक्तिको राय खोज्नुहोस्। छनौट हुन र स्वादको खेलमा नपर्न कोसिस गर्नुहोस्, यसको लागि आलोचना खोजी गर्नुहोस् मानिसहरु तपाइँ प्रशंसा र यो व्यक्ति किन यस्तो लाग्छ भनेर विश्लेषण गर्न उद्देश्य राख्नुहोस्।
तिनीहरूलाई तपाईंलाई अव्यावसायिक डेलिभरी समयमा राख्न नदिनुहोस्
परियोजनाको वास्तविक वितरण मिति के हो सोध्नुहोस्। वास्तविक व्यक्तिहरू बारे झूट बोल्दै अन्य व्यक्तिहरूलाई तपाईंको प्राथमिकता सूची निर्धारण नगर्नुहोस्। एक परियोजना समय तालिका को लागी तपाइँको ग्राहकहरु लाई सोध्नुहोस् कि तपाइँ किन बुझ्न को लागी यो मिति छान्नुभयो। यद्यपि, प्रत्येक परियोजनाको लागि म्यादहरू राख्नुहोस्। यी उत्पादकत्व को लागी आवश्यक छ, किनकि तीनिहरूले हाम्रो सबै ध्यान केन्द्रित गर्ने परियोजनामा ​​कुशलतापूर्वक काम गर्न मद्दत गर्छन् र अर्कोसँग जारी राख्नुहोस्।
सबै कुरामा प्रेरणा खोज्नुहोस्
विश्व प्रेरणादायक हो र एक निर्माताले विश्वलाई समाहित गर्दछ र यसलाई पुन: व्याख्या गर्दछ। यो एक सफल डिजाइनर के गर्छ। तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कसरी आइटमको किप्लीपिंगहरू लिने र तिनीहरूलाई फेरि सँगै राख्नु पर्ने जुन कार्यशील र / वा रचनात्मक रूपमा आकर्षक बन्छ।
अधिक गतिको साथ फिर्ता आउन आफैलाई दूरी गर्न सिक्नुहोस्
यो सोच्न गलत छ कि हामीले सफल हुनको लागि हामीले आफ्नो समयको १००% समर्पित गर्नुपर्छ। संतृप्ति को अनुहारमा यो थाहा हुनु आवश्यक छ कि कहिले एक क्षण लिने, टाढा हिंड्ने र खाली गर्ने बारे। यी अवस्थाहरूमा, उदाहरणका लागि शारीरिक गतिविधि, हिड्न वा नृत्य कक्षा लिनु आदर्श हो।
तपाई के राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्
अर्को शब्दमा तपाइँको कोठा खोज्नुहोस् र ठूलो शक्ति संग त्यहाँ विकास गर्नुहोस्। एक पटक तपाईं बजार प्रवेश गर्न र एक विशेष गतिविधिमा आफैलाई स्थापित गर्न को प्रबन्धन गर्नुभयो, तपाईं नयाँ चुनौतिहरू लिन सक्नुहुनेछ। तर सबै भन्दा पहिले दिमागमा राख्नुहोस् यो मात्रा होइन तर गुण हो।
सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस्
तपाईंले सुन्ने कला विकास गर्नुपर्नेछ। यी ग्राहकले कसरी सोच्छन् भनेर सिक्न आवश्यक छ तर सबैभन्दा बढि यसले तपाइँको उत्पादनको प्रयोगकर्तासँग सहानुभूति देखाउन र उत्पादनलाई किन यस्तो वा त्यस्ता सुविधाहरू हुनु आवश्यक छ भनेर बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछ।
यो डिजाइनरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षमता मध्ये एक हो। हामी केहि मा वास्तव मा राम्रो बन्न जाँदैछन् मात्र तरिका निरन्तर अभ्यास छ कि के हो जान्न हामीलाई नेतृत्व दिन्छ गतिविधि गर्नका लागि अधिक प्रभावकारी तरिकाहरू.
तपाईंको प्राथमिकता क्षमता सुधार गर्नुहोस्
कसलाई वा के तपाईंको पूर्ण वा नजिकको ध्यान आवश्यक छ बुझ्नुहोस्। केवल प्राथमिकता मार्फत तपाईं कडा डेलिभरी समयहरू सबै भन्दा कुशल तरीकाले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ अधिक निजीकृत सेवा.
प्रचलनहरूको साथ अपडेट रहनुहोस्
डिजाइन एक हो उद्योग प्रवृत्ति द्वारा निर्धारित र यसैले हामी जहिले पनि कार्यहरू गरिरहेका विभिन्न बजारहरूमा प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिका बारे हामी सचेत हुनुपर्दछ। यो निर्धारण गर्दछ लोकप्रियता र स्वीकृति हाम्रो उत्पादनको आम जनतामा हुनेछ।
तपाईले के गर्नु पर्छ त्यस भन्दा पछाडि जानुहोस्
यो धेरै सरल छ यदि तिनीहरूले तपाईलाई १००% सोध्छन् भने तपाईले २००% दिनुहोस्। यसैले तपाईं ग्राहकलाई परियोजना प्रतिबद्धता देखाउनुहुनेछ र तपाईसँग राम्रो अवसर छ कि उसले तपाईसँग फेरि काम गर्ने छनौट गर्दछ। अर्कोतर्फ, यसले तपाईंलाई आफ्नो गतिविधि अघि बढाउने उत्कृष्टताको लागि प्रशंसा गर्न मद्दत गर्दछ।
दबाबमा काम गर्न सिक्नुहोस्
यो एक लक्ष्य उन्मुख उद्योग हो। यस कारणका लागि, प्राय: परियोजनाहरू तिनीहरू डिजाइनर को एक सक्रिय भूमिका को आवश्यकता हुनेछ। यो आवश्यक छ कि डेलिभरीहरू तय भएका मितिहरूमा पूरा हुन्छन् किनकि हाम्रो काम लि is्क हो जसले सम्पूर्ण उत्पादन श्रृंखलालाई असर गर्छ र ग्राहकलाई हानी गर्दछ।
मल्टीटास्किंग क्षमता विकास गर्नुहोस्
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ एकै समयमा एक प्रोजेक्ट विकास गर्न सफल हुन सक्नुहुन्छ, तपाइँ धेरै गलत हुनुहुन्छ। प्रमुख एजेन्सीहरूमा काम गर्ने डिजाइनरहरूको सामान्यतया -5-१० प्रोजेक्टहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई एक्लै असाइन गरिएको। यदि तपाईं ठूला लीगहरूमा जान चाहानुहुन्छ भने तपाईंले लिनुपर्नेछ धेरै ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू छिटो ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता छ।
राम्रो संगठन प्रणाली कायम गर्नुहोस्
स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्षम हुन र एकै समयमा धेरै परियोजनाहरूको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनु हो एक महान डिजाइन प्रबन्धक हुनु आवश्यक छ। त्यसकारण स्थापना भएका मितिहरूमा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सबै परियोजनाहरूको योजना र तालिकाका बारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। यसका लागि तपाईले उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै Trello o Wunderlist.
डिजाइनरलाई संलग्न गराउने क्षमता हुनु यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ विभिन्न गतिविधि र उद्योगका मानिसहरूसँग सम्बन्ध। जहिले पनि तपाइँको ब्यापार कार्ड बोक्नका लागि याद गर्नुहोस् र एक सम्पर्क सूची निर्माण गर्न इच्छुक हुनुहोस् जुनमा व्यापारीहरू, कलाकारहरू, शिक्षकहरू र सहकर्मीहरू छन्।
तपाइँको उद्योग जान्नुहोस्
कसैलाई पनि तपाईको उद्योगलाई तपाईको भन्दा राम्रोसँग जान्नु हुँदैन। ज्ञानले तपाइँका सहकर्मीहरू भन्दा प्रतिस्पर्धी फाइदाहरू दिनेछ। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो गतिविधिसँग सम्बन्धित सबै कुराको बारेमा जति धेरै जान्न प्रयास गर्नुपर्दछ। तपाईले गर्न सक्ने कोर्स, तपाईले; कला प्रदर्शनी तपाईं जान सक्नुहुन्छ, तपाईं जानु; किताब जुन बाहिर आउँदछ, तपाईं यसलाई पढ्नुहुन्छ; डिजाइन कार्यक्रम देखा पर्दछ, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सिक्नुहुन्छ।
एक अधिकार बन्नुहोस्
व्यक्ति कसैलाई पछ्याउन खोज्दैछन्, त्यसैले एक बन्नुहोस्। यो के हो भनेर थाहा पाउँदा डिजाइनरको लागि बढी सन्तोषजनक अरू केही छैन अरूको लागि एक प्रेरणादायक व्यक्ति.
तपाईंको ग्राहकहरूलाई ट्र्याक गर्नुहोस्
यो केवल एक परियोजना पूरा गर्न मात्र पर्याप्त छैन, तर पनिaपरिणामहरूको मूल्या to्कन गर्न अनुवर्ती अनुगमन यो परियोजना संगठनमा भएको थियो। त्यसो भए, यसबाट भविष्यका सुधारहरू अनुमान गर्न सकिन्छ र निर्धारण गर्न सकिन्छ कि के थिए गल्ती गरियो तिनीहरूलाई फेरि दोहोर्याउँदैन।
जब तपाइँ माथि हुनुहुन्छ, एलिभेटरलाई तल पठाउनुहोस्
तर सबै भन्दा माथि तपाईं के गर्नुहुन्छ, एक पटक तपाईं एक सफल डिजाइनर बन्नको लागि उनीहरूले तपाईलाई मद्दत गरे जस्तो सहायता गर्न निश्चित गर्नुहोस्। यो सम्भाव्यताको लागि अन्य व्यक्तिहरूलाई अनुमति दिन उचित छ र यो भुल्नु हुँदैन कि त्यो ठाउँमा थियो र हातको आवश्यक छ। हामी बढ्न मात्र जारी राख्न सक्छौं यदि हामीसंग कृतज्ञता र एकता छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » २० बानीहरू जसले तपाईंलाई एक सफल डिजाइनर बनाउँदछ
रचनात्मक प्रोजेक्टहरूको लागि धेरै नै मूल फन्टहरू उत्तम